13 pesdị Mgbasa Ozi Email Email Kwesịrị Imme | Martech Zone
Na-arụ ọrụ na ọtụtụ ndị na-ere ozi email, ọ na-atụ m mgbe niile na enwebeghị usoro eji arụ ọrụ, arụ ọrụ triggered email mkpọsa n'ime akaụntụ mgbe mmejuputa iwu. Ọ bụrụ na ị bụ ikpo okwu na -agụ nke a - ịkwesịrị ịkwadebe mkpọsa ndị a ịbanye na sistemụ gị. Ọ bụrụ na ị bụ onye na -ere ahịa email, ị kwesịrị ịdị na -arụ ọrụ iji tinye ọtụtụ ụdị ozi ịntanetị kpaliri ka ị nwere ike ịbawanye njikọ aka, nnweta, njigide, na ohere ịrị elu.
Ndị na -ere ahịa na -ejighị mkpọsa email kpaliri ugbu a na -efu efu efu. Ọ bụ ezie na ozi ịntanetị kpaliri na -eto n'ike, imirikiti ndị na -ere ahịa anaghị eji usoro a dị mfe.
Ozi ịntanetị akpalitere bụ ozi ịntanetị sitere na omume, profaịlụ, ma ọ bụ mmasị nke onye debanyere aha. Nke a dị iche na nke a na-ahụkarị, nnukwu mkpọsa ozi na-egbu na akara akara ama ama ama akara aka.
N'ihi na mkpọsa ozi email kpalitere na-ezubere iche ma na-ewepụta oge mgbe onye debanyere aha na-atụ anya ha, ha na-enweta nsonaazụ dị elu ma e jiri ya tụnyere azụmahịa dị ka mkpọsa email na-emebu dị ka akwụkwọ akụkọ. Dabere na Blueshift Benchmark akụkọ na Triggered Email Marketing:
Ná nkezi, ozi ịntanetị kpaliri bụ 497% dị irè karịa ozi ịntanetị gbawara agbawa. Nke a na -ebute site na a 468% ọnụego pịa dị elu, yana a 525% ọnụ ọgụgụ ngbanwe dị elu.
Na nkezi, mgbasa ozi email na-eji njikarịcha oge bụ 157% dị irè karịa ozi-e ndị anaghị etinye oge. Nke a na -ebute site na a 81% ọnụego pịa dị elu, yana a 234% ọnụ ọgụgụ ngbanwe dị elu.
Ná nkezi, mkpọsa email na -eji ndụmọdụ bụ 116% dị irè karịa mkpọsa ogbe na -enweghị ndụmọdụ. Nke a bụ a 22% ọnụego pịa dị elu, yana a 209% ọnụ ọgụgụ ngbanwe dị elu.
Blueshift nyochara ozi ijeri 14.9 n'ofe ozi-e yana ozi mkpagharị ekwentị nke ndị ahịa Blueshift zitere. Ha nyochara data a iji ghọta ọdịiche dị na metrics njikọ aka gụnyere ọnụego pịa na ọnụego ntụgharị n'etiti ụdị nkwukọrịta dị iche iche. Dasetetị akara aka ha na -anọchite anya vetikal ụlọ ọrụ iri na abụọ gụnyere eCommerce, Ego Ndị Ahịa, Ahụike, Mgbasa Ozi, Mmụta, na ndị ọzọ.
Email na -eweghachi - Izipu onye ahịa ozi mgbe ngwongwo laghachiri na ngwaahịa bụ nnukwu ụzọ iji bulie ntụgharị ma weghachite onye ahịa na saịtị gị.
Email agwa - Mgbe onye ahịa na-eji akara gị emekọ ihe n'ụzọ anụ ahụ ma ọ bụ dijitalụ, ịmanye ozi email ahaziri onwe yana nke dabara adaba nwere ike inye aka mee ka njem ịzụ ahịa dịkwuo ngwa. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye ahịa na-eme nchọgharị na saịtị gị wee pụọ… ị nwere ike ịchọrọ ịnye email nkwanye ngwaahịa nke na-enye onyinye ma ọ bụ ozi agbakwunyere na-adọta ha ịlaghachi.
Email nyocha - Mgbe emechara iwu ma ọ bụ ọrụ, izipu email ka ị jụọ ka ụlọ ọrụ gị siri rụọ ọrụ bụ ụzọ dị mma iji kpokọta nzaghachi dị ịtụnanya na ngwaahịa, ọrụ na usoro gị. Email nyocha ga -esochi nke a ebe ị na -arịọ nyocha n'aka ndị ahịa gị ịkekọrịta na ndekọ na saịtị nyocha.
Lelee Akuko Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi nke Blueshift